OTU ESI EMEPỤTA AKAỤNTỤ NA MAIL RAMBLER - RAMBLER MAIL - 2019
Isi Rambler Mail
Mepụta ozi igbe Rambler
Ozi Rambler - otu n'ime ọrụ maka mgbanwe nke ozi kọmputa (leta). Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụghị dị ka ewu ewu dị ka Mail.ru, Gmail ma ọ bụ Yandex.Mail, ma o sina dị, ọ na-adaba adaba iji ya ma kwesiri nlebara anya.
Otu esi emepụta igbe ozi Rambler / mail
Ịmepụta igbe akwụkwọ ozi dị mfe ma ghara iwe oge. Maka nke a:
Gaa na saịtị ahụ Rambler / Mail.
Na ala nke ibe ahụ, anyị na-ahụ bọtịnụ ahụ "Ndebanye aha" ma pịa ya.
Ugbu a, ịkwesịrị ị jupụta n'ọhịa ndị a:
"Aha" - ezigbo aha njirimara (1).
"Aha Ikpeazụ" - ezigbo aha onye ọrụ (2).
"Igbe akwụkwọ ozi" - adreesị achọrọ na ngalaba nke igbe akwụkwọ ozi (3).
"Paswọdu" - anyị na-emepụta koodu ntinye pụrụ iche anyị nwere na saịtị ahụ (4). Ike - nke ka mma. Nhọrọ kachasị mma bụ nchikota akwụkwọ ozi si ndekọ dị iche iche na nọmba na-enweghị usoro ezi uche. Dịka ọmụmaatụ: Qg64mfua8G. A pụghị iji Cyrillic mee ihe, akwụkwọ ozi ahụ nwere ike ịbụ Latin.
"Tinyegharịa paswọọdụ" - deegharịrị koodu ntinye nke emepụtara (5).
"Ụbọchị ọmụmụ" - dee ụbọchị, ọnwa na afọ a mụrụ (1).
"Paul" - okike nke onye ọrụ (2).
"Mpaghara" - isiokwu nke mba onye ọrụ nke o bi na ya. State ma ọ bụ obodo (3).
"Ekwentị mkpanaka" - ọnụ ọgụgụ nke onye ọrụ ahụ na-eji. A choro koodu nkwado iji mezue ndebanye aha. Ọzọkwa, ọ ga-adị mkpa mgbe ị na-agbake paswọọdụ, ma ọ bụrụ na ọnwụ ya (4).
Mgbe ị banyere nọmba ekwentị, pịa "Nweta koodu". A ga-eziga koodu nọmba isii maka nọmba site na SMS.
Abanyela koodu nke a n'ime ubi nke na-egosi.
Pịa na "Deba aha".
Ndebanye aha zuru ezu. Igbe dị njikere iji.
Anyị na-egbochi ntinye nke ngwanrọ achọghị ya ruo mgbe ebighi ebi
Ịme aha na akwụkwọ Microsoft Word
Otu esi ehichapụ ngwa na android
Ihe nje msvcr120.dll na-efu na komputa
Iji mee ka laptọọpụ ahụ rụọ ọrụ zuru ezu, ịkwesịrị ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile maka ngwaọrụ ọ bụla. Ọ bụ naanị n'ụzọ dị otú a ka a ga-akpọtụrụ sistemụ arụmọrụ na ngwaike dịka o kwere mee. Ya mere, ịkwesịrị ịmụta otú ị ga-esi budata ngwanrọ dị mkpa maka Asus K56CB. Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka Asus K56CB E nwere ọtụtụ ụzọ ị nwere ike isi wụnye ngwanrọ pụrụ iche na kọmputa gị. GụKwuo
Mpempe ederede na Microsoft Word
Melite Windows 10 na mbipute ọhụrụ
https://termotools.com ig.termotools.com © Rambler Mail 2019